Podcast 9x22: Android inozvirumbidza nezve "notch" | IPhone nhau
Podcast 9 × 22: Android inodada "notch"
Mushure mekushoropodzwa kwekutanga kweiyo iPhone X, zvinoita sekunge izvozvi vagadziri veApple havafari pachinongedzo cheApple nyowani smartphone. Isu tese tinorangarira Samsung shambadziro iyo yaakaseka notch yeiyo iPhone X, asi isu tinogona kukurumidza kuona smartphone kubva kuKorea brand neiyo "eyebrow" pamusoro pechiso. Kunyangwe Google ichasanganisira rutsigiro rwezvikwiriso zvine notch mu Android P, chiratidzo chisina kujeka chekuti maitiro ari kuenda nenzira iyoyo. Isu tinoongororawo dzimwe nhau kubva kunyika yehunyanzvi mune yedu yevhiki podcast. Uri kuzoipotsa here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Podcast » Podcast 9 × 22: Android inodada "notch"
Google inotangisa Google Pay kupindura Apple Pay Cash